Odroid N2: SBC ozo di nma na Raspberry Pi | Akụrụngwa n'efu
HardKernel nwere ọtụtụ ụdị nke Ogwe SBC Odroid -akpali nnọọ mmasị, ma otu n'ime ndị ikpeazụ ụdị ulo oru bụ Odroid n2. Na mgbakwunye, ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na Raspberry Pi, enwere ọtụtụ ọrụ na-enye nkwado maka ụdị bọọdụ a, yabụ ọ bụ uru ma ọ bụrụ na ịchọghị inwe nsogbu ndakọrịta.
Ke ibuotikọ emi m ga-agbalị na-agwa gị banyere ihe niile ihe ndi ozo nke HardKernel meputara na, karisia, gbado anya na bọọdụ Odroid N2. Enwere ọtụtụ ihe ịchọpụta n'aka ndị mmepe a ...
1 Banyere HardKernel
2 Odroid dịgasị iche iche
2.1 Ngwa ndi ozo dakọtara na Odroid N2 na bọọdụ ndị ọzọ
3 Ihe niile banyere Odroid N2
3.1 Odroid N2 teknuzu nkọwa
HardKernel Co. Ltd. bụ ụlọ ọrụ dabere na South Korea, nke ahụ aghọwokwa ihe a ma ama maka ngwaahịa ya, ọkọlọtọ Odroid. Aha ya sitere na njikọ nke Open + gam akporo, ọ bụ ezie na ngwaike ya abụghị ihe mepere emepe ugbu a, ụfọdụ akụkụ akụkụ ya nwere ozi emepere mmadụ niile.
Ekwesighi ka eduzi gị site na mbido ụdị Odroid, ebe ọ bụ na ebughi ha naanị maka na-agba ọsọ android. Ọtụtụ ụdị ya nwere ike ịgba ọtụtụ nkesa GNU / Linux a ma ama, ma na ụdị x86 ha na ndị ebubere maka ARM.
Odroid dịgasị iche iche
HardKernel nwere nnukwu ọtụtụ efere, ihe na-eme ka ọ dị mkpa n'ezie ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị iche. Banyere Rasberi Pi, ọ na-ejedebe na-ere ibe ndị dabeere na ARM. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ ndị ọzọ ISA maka software ọnụọgụ abụọ mbipụta, mgbe ahụ ị gaghị enwe ọtụtụ ihe ị ga-eme.
Kama nke ahụ, android ọ na-enyekwu mgbanwe na ndị ọrụ ya n'echiche ahụ ịhọrọ n'etiti ụdị ụlọ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịchọta ìgwè ndị a nke bọọdụ Odroid:
Dabere na ogwe akaN'echiche a, ị nwere ike ịchọta bọọdụ nke Amlogic na-enweta site na ibe Samsung Exynos, yana ụfọdụ ụdị Rockchip pụrụ iche.
Amlogic: Akụkụ a gụnyere ụdị Odroid C0, Odroid C1, Odroid C2 na Odroid N2.
Samsung: Can nwere ike ịchọta ụdị dịka Odroid XU4 na XU4Q, Odroid HC1 na HC2, na Odroid MC1.
Oké nkume: E nwekwara akụkụ ọzọ dị ka Odroid GO emere iji mepụta obere egwuregwu egwuregwu egwuregwu.
X86 dabere: Ọ bụrụ n ’ị na-ahọrọ ije ije nke nwere sọftụwia sara mbara karị, ị ga-ahọrọ otu nke ị ga - eji PC gị. Igwe Intel Celeron J4115 ndị ​​a dị na bọọdụ Odroid H2 +.
Ngwa ndi ozo dakọtara na Odroid N2 na bọọdụ ndị ọzọ
Na mgbakwunye na ụfọdụ n'ime ihe ntanetị akọwapụtara na blog a maka GPIO nke bọọdụ a, HardKernel nwekwara ọtụtụ ngwa na mgbakwunye maka mbadamba gị, site na ntanetị, na ntanetị LCD, kaadị ebe nchekwa, ese foto, ngwa ngwa, batrị, mmepe, njikọta, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ezie, ọ bụghị naanị na e nwere ndị Odroid ndị ọzọ maka Raspberry Pi, enwere ndụ gafere nke ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike zụta efere dị ka:
ASUS Tinker Board: na Rockchip RK3288 QuadCore ARM SoC na 1.8Ghz na Mali-T764 GPU, 2GB nke DDR3 DualChannel RAM, Ethernet, nkwado maka 4K, TinkerOS, yana ohere iji rụọ ọtụtụ ọrụ DIY.
Odroid XU4- Odidi ọzọ nke Odroid nwere Samsung Exynos 5422 mgbawa dabere na Cortex-A15 na Cortex-A7 OctaCore, Mali-T628 GPU, 2GB nke LPDDR3, eMMC flash, USB 3.0, HDMI, Ethernet, wdg.
Nkume 64: mbadamba nwere 64-bit Rockchip SoC, 4GB nke RAM, USB 3.0, 4K nkwado, 128GB flash, wdg.
Ị ga -ahụ Lenovo Leez P710: SBC board lekwasịrị anya na IoT, yana CPU dị ike na GPU, 4GB nke RAM, 16GB nke eMMC flash, ikike ijikọta ọnụ, AOSP Android na Ubuntu Core support, ...
Rasberi Pi 4 4GB Model B +: ọkacha mmasị, nke kachasị ọhụrụ na bọọdụ SBC a.
Ihe niile banyere Odroid N2
N'ime ngwaahịa HardKernel niile anyị hapụrụ Odroid n2, nke kachasị amasị ha niile. Boardlọ a bụ otu n'ime ọgbọ ndị kachasị ọhụrụ ga-apụta na ụlọ ọrụ a wee nwee nkwalite iji nye ọrụ ka ukwuu karịa ndị bu ya ụzọ, nwee ezigbo ike arụmọrụ na oke ohere. Ike karịrị ike, ọsọsọ, kwụsie ike karịa N1.
Na ekele niile na njirimara ngwaike ya, bido na SoC nke gunyere CPU di ike dabere na ibu.LITTLE ije. Nke ahụ bụ, ọ na-ejikọta ụyọkọ nke abụọ ARM Cortex-A53 CPU cores na arụmọrụ ike ka ukwuu na arụmọrụ dị ala na ụyọkọ ọzọ nke abụọ ARM Cortex-A73 cores na 1.8 Ghz nwere arụmọrụ ka elu.
Ihe nke a na - enweta bụ itinye otu ma ọ bụ ụyọkọ ụyọkọ nke isi n'ime arụmọrụ dabere na arụmọrụ achọrọ n'oge ọ bụla dabere na arụ ọrụ. Yabụ ị nwere ike ịnapụta arụmọrụ mgbe ịchọrọ ya obere oriri mgbe obere obere ha zuru ezu iji rụọ ọrụ ahụ.
Ke adianade do, na SoC nwekwara integrates a dị ike na ọgbọ ọhụrụ nke Mali-G52 GPU ya mere OpenGL based graphics abụghị nnukwu ihe maka obere bọọdụ SBC a. Mgbawa niile wuru na teknụzụ 12nm yana ikike maka ikuku na-ekpo ọkụ yana igwe ihe ọkụkụ agbakwunyere dị ka ọkọlọtọ iji gbasaa okpomọkụ emere.
A na-agbakwunye ebe nchekwa na ihe niile dị n'elu DDR4 ụdị RAM ruru 4GB. Ntọala niile na-eweta arụmọrụ ahụ elu 20% karịa Odroid N1 na multicore.
Ma software, ọ nwere ike ịgba ọsọ GNU / Linux sistemụ arụmọrụ, yabụ ị nwere ike ịhọrọ distrikti ARM kachasị amasị gị nke ịchọrọ, site na Ubuntu, site na ndị ọzọ dị ka openSUSE, gaa Arc Linux. Na mgbakwunye, dịka m kwuru n'elu, ịbụ ebe a na-adịghị ahụkebe, enwere ọtụtụ sistemụ arụmọrụ nke na-eweta onyogho ndị dịkwa kpọmkwem na Odroid N2.
N'ezie ị nwekwara ike na-agba ọsọ android, si na nke 9 na ndị ọzọ. Mana na nke a, ọ bụrụ na ejiri ihuenyo mmetụ aka, mgbe ahụ ọ nwere oke na 2K, ebe vidiyo nwere ike ịbụ 4K.
Odroid N2 teknuzu nkọwa
Na-achịkọta ma chịkọta ha niile nkọwa nka, nke a bụ ndepụta nke isi ihe:
SoC: Amlogic S922X Quad-isi 2x Cortex-A53 na 1.9Ghz + 2x Cortex-A73 na 1.8Ghz. 64-bit ARMv8-A ogwe aka ISA na mgbakwunye Neon na Crypto. Na Mali-G52 GPU nwere nkeji 6 na 846 Mhz.
Nchekwa: 4GB nke RAM DDR4 PC4-21333. EMMC flash nchekwa ruo 128GB + microSD kaadị ikike.
Red: Gigabit Ethernet LAN (RJ45) na kaadị netwọkụ Realtek RTL8211F, na nhọrọ nkwụnye USB WiFi.
Njikọ: HDMI 2.0, vidiyo mejupụtara, jaakụ ọdịyo, SPDIF anya, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 OTG, 1 UART, 40 pin GPIO pin PWR, SPI, wdg.
Nri: DC jaak 5.5mm na njikọta dị mma nke dị na 2.1mm. 7.5v-18V (ruo 20w), ya na nkwụnye ọkụ 12V / 2A.
Nri: na enweghị ọrụ (IDLE) ọ na-erepịa naanị 1.8W ihe ruru.
Factdị ihe (akụkụ): 90x90x17mm (SBC), 100x91mmx24 (akwa mkpuchi ma ọ bụ ihe mkpuchi)
Ibu ibu: 190 g na heatsink
Ahịa: 79 $
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Odroid N2: SBC dị mma nke ọzọ na Pip Pi
Arduino Due: ihe niile banyere ụlọ ọrụ mmepe a